Bogga ugu weyn / blog / Talooyinka Musqusha ee ugu Fiican Abid, Dhamaan Meel Kaliya!
2020 / 10 / 16 Qoondayntablog 1220 0
Musqusha way yar tahay, laakiin waa qayb aad muhiim ugu ah qurxinta waxayna xiriir dhaw la leedahay nolosheena. Maalin walbo noloshu halkaan ayey ka bilaabataa halkaana ku dhammaataa. Haddii aan si sax ah loo rakibin, adeegsiga howsha ayaa had iyo jeer u nugul dhibaatooyinka qaar ka mid ah iyo dhibaatooyin kale, maanta musqusha waa jaban tahay, berrito qubeyska ayaa xiran …… maalin kasta waalli ayey kuu jiidi kartaa.
Sababtoo ah musqusha ayaa muhiim u ah nolol maalmeedka, sidaas darteed markaad qurxinayso musqusha, waa inaan xakameyno dhammaan dhinacyada faahfaahinta, si aan isugu dayno inaan uga fogaanno saameynta nolol maalmeedka.
Qoraalada Dayactirka Musqusha
1,Kaydso Khadadka Biyaha iyo Laydhka
Dayactirka musqusha, dheriyo badan oo asxaab ah ayaa inta badan ilaaway inay keydsadaan xarumo koronto oo badan iyo marin biyoodyada, markii dambe bedelida musqusha casriga ah iyo tuwaalka korontada ku shaqeeya waxay u badan tahay inuu horseedo adeegsiga dhibka.
2,Dhibaatada Dhismaha Darbiga Iyo Dabaqa
Samee ugu yaraan 24 saacadood ka hor intaan sagxad la dhigin tijaabada biyaha xiran; dusiyeyaasha sagxadaha iyo darbiyada derbiga iyadoo la marsiinayo tolmada, laamiyada la jeexayo si loo hubiyo in dusha lebenku leeyahay 1 ° oo ku saabsan foorarka bullaacadaha, jiirada waa inay u ahaato dhinaca bullaacadaha dhulka.
3, Qalalan Oo Qoyan Si Lookala Saaro
Haddii musqusha aan loo kala soocin qoyan iyo qalalan, way fududahay in la sababo in biyuhu ay ku faafaan meel kasta oo ka mid ah qubeyska, waana u fududahay dadka in ay siibtaan oo ku dhacaan, taas oo sidoo kale aan ku habboonayn nadiifinta.
4,Dhibaatada Maxay Noqon Doontaa Haddaan Ku Bedelno Musqusha Caadiga ah Musqusha Smart-ka ah?
Markii la rakibayo musqulaha caadiga ah, dadka isticmaala guud ahaan ma tixgeliyaan isbeddelka soo socda ee biyaha iyo korontada, ma jiro booska musqusha oo loogu talagalay bixinta koronto xoog leh, marinnada iyo marinnada biyaha, isticmaalka musqulaha casriga ah ayaa ka sii adkaan doona.
Musqulaha Cusbooneysiinta Dhibaatooyinka Caadiga ah
1, Keebaa Ka Ficil Badan, Maydhasho Masaarid?
Guud ahaan, qubeysku waa inuu noqdaa mid ka ficil badan barkadda qubeyska, qubeysku waa mid waqtigiisa ka habboon oo ku habboon oo wax ku ool ah, oo caafimaadkiisu aad u yar yahay.
2,Daahida Qubeyska Ma Fudud Oo Loo Isticmaalaa?
Qoysaska yaryar, aagga musqusha waa yar yahay, qaybta muraayaduna waxay ka dhigaysaa musqusha yar ee asalka ah inay u muuqato mid aad u camiran. Kadib daahyada qubayska oo ah qayb ahaan, markaa booska oo dhan ee ballaadhinta ayaa aad u ballaaran oo deeqsi ah.
3, Qurxinta Musqusha oo Lagu Xushay Muuse, Mise Madoow Saafi ah iyo Caddaan Ficil Badan?
Saamaynta qurxinta ee Mosaicku waa mid wanaagsan, laakiin qiimaha qalabka iyo shaqada ayaa qaali ah. Mosaicsku way adag tahay in la daryeelo oo waxay u muuqdaan inay qariyaan wasakhda. Marka isku day inaad ku isticmaasho meelaha qalalan!
4,Hawada Sanduuqa Kahorka 'Countertop Basin' Sideed Ku Kala Doortaa Inta Udhaxeysa Meel-miisaaman iyo Dooxada Hoos yimaada?
Sariirta miiska dushiisa saaran waxay leedahay qaabab badan, xulasho ballaaran iyo saameyn qurxin ku habboon. Way fududahay in la rakibo oo si fudud loo ilaaliyo mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, biyuhu way fududahay in dibedda lagu buufiyo marka aad isticmaaleyso weelka miiska saaran.
Weelka miiska hoostiisa waxaa lagu dhejin doonaa dhexda miiska dushiisa, taas oo ka qurux badan weelka masraxa ku yaal, oo dusha hoose ee saxanka ayaa ka hooseeya miisaska, sidaas darteed biyaha dusha ka saran miiska ayaa si fudud ugu qulqulaya ama u tirtiri kara weelka , sidaa darteed caafimaadka ayaa sifiican looga taxadaraa.
5,Dabaqa Dhulka Iyo Saldhigga
Goobta qashin-qubka dabaqa wuxuu u baahan yahay in si taxaddar leh loo tixgeliyo, iyadoo la doorbidayo inuu ku yaalo dhinac ka mid ah marmarka, haddii ay ku taal bartamaha musqusha, markaa qashin-qubka dhulka ma noqon doono meesha ugu hooseysa iyadoo aan loo eegin sida ay taallo u foorarsato.
Saldhigyadu waa inay ahaadaan kuwo loogu talagalay beddelidooda, gaar ahaan musqusha kululeeyaha biyaha korontada ku shaqeeya oo leh beddelaad ayaa habboon. Meesha ku xigta saxanka waxay u baahan tahay in yar oo kale looga tago qalabka guud sida timo engejiyeyaasha, makiinadaha miiqyada iyo burushka cadayga korontada!
6,Musqusha Qiiqa Hawada
Musqusha ayaa ah mid aad u qoyan oo u nugul bakteeriyada, sidaas darteed hawo qiijiye ayaa lagu dhejin doonaa musqusha, taas oo xallinaysa dhibaatada qoyaanka ee goobta iyadoo musqusha ka dhigeysa mid cusub ~.
7,Jaangoynta Cabir kasta oo Hawl ah
Hore:: 4.95m2 Qaabka Scandinavian-ka, Musqusha Lamaanahan Dhallinyarada ah Ayaa Xitaa Ka Wanaagsan Qolka Nolosha! Next: Qoysaska Shiinaha, Runtii Miyaanay U Qalmin Kala-Bixinta Saddexaad?